मोटी केटी राम्री भए पनि बिहे गर्न पातली किन चाहिन्छ?, यस्तो छ रोचक कारण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मोटी केटी राम्री भए पनि बिहे गर्न पातली किन चाहिन्छ?, यस्तो छ रोचक कारण
एजेन्सी। कालोको विपरित सेतो, रातको विपरित दिन, अगाडिको पछाडि, लामोको छोटो, पातलोको मोटो हामी सबैले यो कूरा विद्यालयमा पढेका नै छौं तर पातलोको मोटो कसरी खराब भयो त रु मोटो भने बितक्कै केही मान्छेले असुन्दर होला भनेर नै सोच्छ, तर यो कुरा कतिको यर्थाथ छ त रु
एक अनुसन्धानले हालै प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनमा विश्वको अधिकांश पूरुषले मोटो केटी नै मन पराउँछन् । अनुसन्धानमा भाग लिएका पुरुषबाट मोटी केटी धेरै नै हट र सेक्सी हुन्छ भने कुरा पनि आयो ।
तर उनले मोटी केटीसँग बिहे गर्न ठाडै अस्वीकार गरियो । यसो किन गरेको होलान् भनेर अनुसन्धानकर्ता नै चकित परे । आफुलाई मोटी केटी मन परेपनि विहे गर्न किन नमानेको होलान् भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरुको एउटै जवाफ थियो की अरु मान्छेले के भन्लान भनेर ।
तर विहे गर्नको लागि स्लिम र फिट केटी नै चाहेको हुन्छ, किन भने मोटी श्रीमती तेरो छन् भनेर कुरा न काटोस् भनेर । मोटी मान्छे आफैमा गह्रौ हुने उनीहरुको ठहर छ । मोटोपनाका बिषयमा ती पुरुषहरु पुरै विपक्षमा देखिएका थिए । मोटो मान्छे देख्नमा राम्रो भएतापनि विवाह गर्न स्लिम चाहिने उनीहरुको तर्क थियो ।